Milan Skriniar oo shaaca ka qaaday xiddigii ugu adkaa ee uu ku wajahay kubadda cagta… (Ma Ronaldo mise Messi) – Gool FM
Milan Skriniar oo shaaca ka qaaday xiddigii ugu adkaa ee uu ku wajahay kubadda cagta… (Ma Ronaldo mise Messi)
Dajiye October 11, 2019
(Milano) 11 Okt 2019. Daafaca kooxda kubadda cagta Inter iyo xulka qaranka Slovakia ee Milan Škriniar ayaa xaqiijiyay in maskaxda naadiga Nerazzurri ay gabi ahaanba is bedeshay tan iyo imaanshiyaha tababare Antonio Conte.
Dhinaca kale Milan Škriniar ayaa rajo weyn ka muujiyay in maalin maalmaha ka mid ah uu noqon doono kabtanka kooxda Inter Milan.
Inter ayaa laga badiyay kulankoodii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, kaasoo ay kula ciyaareen kooxda Juventus garoonkooda Giuseppe Meazza, laakiin wixii kulankan ka horeeyay waxay guul gaareen 6 kulan oo xiriir ah, wuxuuna si gaar ah xiddigan u soo bandhigay qaab difaaceed cajiib ah.
Haddaba daafaca reer Slovakia ayaa wareysi uu bixiyay “Sportmediaset” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan ka shaqeyneynay tan iyo maalintii ugu horeysay isku diyaarinta xilli ciyaareedka inaan badino, Waxaan dooneynaa inaan badino kulan walba waana inaan sii wadnaa sidan oo kale”.
“Antonio Conte wuxuu bedelay maskaxdeena maxaa yeelay wuxuu u adeegsaday guul mana ahan inaan is dhiibno ilaa iyo dhamaadka”.
“Dabcan guuldaradii Juventus wax xun ayeey inoo aheyd annaga, waxa ay aheyd guuldaradii ugu horeysay ee soo gaarta kooxda, in kasta oo aan si fiican u ciyaarnay laakiin waxay ku guuleysteen inay ka faa’ideystaan fursadihii ay heleen anagana sidaas ma aanan sameynin”.
“Waxaan rabaa in Inter Milan aan kula guuleysto horyaal, isla markaana aan noqdo hogaamiye kooxeed Waa inaan ka fikirnaa horumarka kooxda”.
Intaas kaddib Milan Škriniar ayaa wuxuu ka hadlay xiddigii ugu adkaa uu wajahay xirfadiisa kubadda cagta ilaa iyo haatan wuxuuna yiri:
“Dabcan waa Lionel Messi, sababtoo ah wuxuu aqriyaa ciyaarta iyo garoomada, wuxuuna dareemaa boosaska ka ag dhow”.
“Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale sidoo kale waa ciyaartoy waa weyn. Nasiib ayaan ku leeyahay inaan wajaho Messi iyo Ronaldo maalmo yar gudahood”.
“Eden Hazard ma bedeli karo Cristiano Ronaldo” – Arsene Wenger
RASMI: Xiddigii ugu fiicnaa iyo goolkii ugu quruxda badnaa Premier League bisha September oo lagu dhawaaqay